Izimbongolo zingabangela ukulahlekelwa okukhulu kwemfuyo kanye nokulima, izithelo nezithelo zomvini. Izinombolo ezikhulayo ziholela ekukhathazeni okukhulayo mayelana nomthelela wazo ezinhlobonhlobo zezintambo eziphilayo, izinyoni ezincane nezinye izinhlobo ze-raptors.
Kodwa, akuzona zonke ezimbi. Ngokusho kwe-Endangered Wildlife Trust, izimpungushe zifeza indima ebalulekile yezinto eziphilayo njengabantu abaqhakazile, nokusetshenziswa kwazo kwezidumbu zenyama ezisiza ukuvimbela ukusakazeka kwezifo. Basiza futhi ukugcina amagundane namagundane ngaphansi kokulawula futhi izidleke zabo zivame ukusetshenziswa ngama-cuckoos noma amanye ama-raptors, njenge-Greater Kestrels ne-Lanner Falcons.
Igwababa Nehlungulu Emhlophe
Izimpungushe zezinyosi (Corvus albus) kanye namagwebi amhlophe (uCorvus albicollis) yizona eziyinhloko eziphazamisayo emapulazini. Izimpungushe ezindala zibomnyama nxazonke, ngaphandle kwekolera elimhlophe nesigqoko esingaphezulu esiya emaceleni kwesifuba, izinhlangothi zomzimba nama-axillary.
Izikhukhula ezindala ziba ngu-45 cm ubude, kanti ubude babo bephiko buhlukahluka ngokusho kwesigaba sezinyoni kanye nesikhathi sezinyoni. Zitholakala kulo lonke elaseNingizimu Afrika, kepha ngokuvamile zihlala eduze nezindawo zasemapulazini, i-savanna, izindawo zasemadolobheni, ukuthuthwa kwemfucuza, imigwaqo yemigwaqo kanye nezitimela.
Igwevu elimhlophe elinomhlophe linombala omnyama okhanyayo ngekoloni emhlophe emqaleni. Isikhwama saso esikhulu se-arched sinomnyama ngephuzu elimhlophe. Abantu abadala bangama-50 kuya ku-54 cm ubude, benamaphiko ama-48 kuya kwangu-43 cm. kulo lonke elaseNingizimu Afrika, ikakhulukazi ezindaweni ezizintaba, izigogodla namadwala, kuyilapho ukudlala kungase kwenzeke emazweni amaningi avulekile.
Zombili izihlobo zezinhlobo zokuphila. Izidleke zakhiwo ezinamandla ezenziwe ngezinti kanye nezimpande, ezinamathele angaphakathi okudaka, udonga, izinwele zoboya noma utshani. Isikhathi sokuvuthwa sihlukahluka ngokuvumelana nezimo zezulu, kodwa ngokuvamile kusukela ngoJulayi kuya kuNovemba ngesikhuva esimhlophe esimhlophe futhi kusukela ngoJulayi kuya kuJanuwari ukukhala. Amantombazane alala amaqanda amane kuya kwangu-5 ngesikhathi.
Izimpungushe nezinyembezi ezimhlophe zenza umonakalo omuhle kakhulu. Imilomo yawo ayibukhali ngokwanele yokugcoba inyama, ngakho-ke ivame ukukhipha amehlo amawundlu noma amawundlu azinyane lemvu, eshiya izimpumputhe ziyimpumputhe. Bangela ukulahlekelwa kwemfuyo enkulu, ikakhulukazi ngezikhathi zesomiso.
Isidumbu esivulwe amehlo, umlomo, umbilicus noma i-anus, kuvame ukuba uphawu olucacile lokuthi omunye womndeni wezinkukhu usondle kuwo.
Kunzima kakhulu ukuphatha izimpungushe. Azizona izinhlobo ezivikelwe, ngakho-ke zingase zizingelwe epulazini, kodwa hhayi emigwaqweni yomphakathi noma endaweni kamasipala. Abanye abalimi basebenzisa ama-deterrents alalelwayo nokubonwayo, ngokwesibonelo, ngokusebenzisa izimbonisi noma ukusabalala, ukwesabisa izinyoni ezifuywayo ezifuywayo ezifuywayo kanye nezitshalo, kanti abanye bebeka amanetha phezu kwezitshalo zabo ukuze bavikele emonakalweni yezinyoni.
Ukusebenzisa ubuthi kungekho emthethweni, ngoba ngokuvamile kuvumelana nokubhujiswa kwezilwane ezingabhekisiwe, kufaka phakathi izidakamizwa ezingavamile nezingasongelwa.
Ukuphathwa okuqinile, kuqala kuhlanganisa ukunciphisa imithombo yokudla etholakalayo. Lokhu kusho ukungcola nokuthuthwa okungcono kakhulu, ikakhulukazi ezindaweni zokuhlala ezingekho emthethweni, ukuthutha kanye nezindawo zokulahla. Amathini amathangi kufanele avikeleke, abaphakeli bezinyoni kufanele basuswe futhi izilwane zokudla ezifuywayo kufanele zihanjiswe ngaphakathi. Kusho ukuthatha ukulawula okungcono amapheya, ngoba lezi zinyoni ziye zathinteka ekuhlakazeni kwamapareya aseNama Karoo.
Okwesibili, kuhlanganisa ukuvikeleka okungcono kwezilwane ezisengozini. Izimvukazi ezikhulelwe kumele zihanjiswe emakamu amancane, lapho kulula khona umalusi ukuba aziqaphele, amasonto ambalwa ngaphambi kokugubha imbuzi futhi kufanele ahlale lapho amasonto ambalwa emva kokugaya izimvu, kuze kube yilapho bona kanye namawundlu abo bengasengozi kakhulu.
I-nest namaqanda angabhujiswa, kodwa kungabangela ukubeka amaqanda amaningi. Ngakho-ke, kunengqondo ukubhubhisa imibungu bese ubuyela amaqanda esidlekeni.
Ukuze uthole olunye ulwazi xhumana ne-Secretariat Management Forum Secretariat.